Adịbeghị anya, ọtụtụ Australian music artists abịa forefront na adịkwaghị na music idaha na ndidi heartthrobs nke Narị Afọ Iri. Ha amara na ịke jikọtara na ha egwú talent N'ezie gburu a-aghọta ihe atụ na mainstream. Ọtụtụ n'ime ha merie mba tokwara adịghị anya mgbe mwepụta nke ha mpụta mbụ EPS, albums na kpọrọ. Australian music artists na-enwe mmasị n'ebe ọ bụghị nanị n'ihi na ha egwú talent kamakwa maka n'azụ igwefoto video arụ ọrụ. Nyere n'okpuru bụ top 20 Australian artists na emewo ya ka ọ n'elu site emeri ọtụtụ enọ, ukpono na accolades.
2.Birds nke Tokyo
4.Little Oké Osimiri
9.Architecture na Helsinki
12.Boy & agba
15. Men Rụọ Ọrụ Mgbe
16. mmadụ jupụtara na ụlọ
20. 5 Sekọnd nke Summer
Conrad Sewell malitere na-abụ abụ na dị nnọọ obere ma kwaga Los Angeles na-achụso a egwú na-arụ ọrụ na ọtụtụ ama music nka dị ka Christina Aguilera, Joss Nkume, One Direction na ụgbọ okporo ígwè. Na 2015 ọ mara ọkwa ya oghere na Ed Sheeran si Australian tour na ya Facebook page. Ya hit ọnụ ọgụgụ ndị bụ ndị na-esonụ.
Jide m Up
2) Birds nke Tokyo:
Ufe nke Tokyo bụ a ise-ibe oké nkume mmachi na ha mpụta mbụ album "Day Otu" ruru Nke 3 na ikuku Independent Album chaatị dị iche iche. Ebe ọ bụ na mgbe ahụ, ha nwere tọhapụrụ ọtụtụ albums dị ka "Universes" ke 2008, "nnụnụ nke Tokyo" na 2010, na "March Ọkụ" na 2013. Ha hit nọmba na-na-esonụ.
Wild Mgbe Heart
Jarryd James bụ a na-agụ egwú-songwriter na-emeputa onye genre nke music bụ Electronica. Enye akamana ke Brisbane, Australia. Ọ batara idaha ke 2014 na nwere onwe ya ndekọ labeelu aha "Jarryd James Music. Ke mbubreyo 2014 tour James akwado Broods na Angus na Julia Nkume na 2015 tour. Ya hit ọnụ ọgụgụ ndị bụ ndị na-esonụ.
4) Little Oké Osimiri:
Little Osimiri a mmapụta oké nkume mmachi dee Andy Butler, Oliver Kirby, Leighton na Dylan Clark na e guzobere na 2013 na aka ka Sony Music Australia. Na 2014 ọwa V nominated mmachi maka Oz Artist nke Year. Little Oké Osimiri malitere ha Australian tour na July 2015. ha hit nọmba na-na-esonụ.
Tkay Maidza bụ Australian na rapper mụrụ na Zimbabwe. Na 2013 ọ na-apụta na Brontosaurus na a na-abụghị album otu na peaked Nke 12 na Australian Urban chaatị ọnọdụ. Ọ tọhapụrụ ya album "Gbanye Mezie" na 2014 na-esonụ bụ otu Hits nke ndị album.
Mgba ọkụ Lanes
ÌGWÈ mmadụ na-
Iggy Azalea kwagara US si Australia na-achụso ya music ọrụ na aka a ndekọ nkwekọrịta na Ukwu Oké mgbagharị na 2012. Ya mixtape akpọ amaghị Art e wepụtara na 2011. Azalea natara abụọ American Music Awards na 2014 tinyere anọ ọzọ Nhoputa. Ya hit ọnụ ọgụgụ ndị bụ ndị na-esonụ.
Composing nke ụmụnne abụọ Malcolm na Angus-eto eto AC / DC bụ a ike oké nkume mmachi kpụrụ na 1973-ewere dị ka ọsụ ụzọ nke oké ụda. Na 2010 AC / DC ndibọhọ Grammy Award maka Best Ike Rock Performance. Ọzọkwa, ha na-ndibọhọ Grammy Awards n'ihi na ha na-esonụ Hits.
The Aguba si Edge
Wouter Andre "Wally" De Backer dị mma maara dị ka Gotye na bụ multi-instrumentalist na-agụ egwú-songwriter. Ọ bụ ya bụ onye so Melbourne Indie-pop Na The Basics. Gotye ndibọhọ 4 Grammy Awards na 2012 ma merie 10 Grammy Awards na 2013. Ụfọdụ n'ime ya Hits agụnye ndị na-esonụ
Onye nke m maburu na mbụ
Si ebe a na Nzuzo
Obi a ọgbaghara
9) Architecture na Helsinki:
Architecture na Helsinki mara maka ha ise studio albums: Mkpịsị Aka gafere, bụrụ na anyị nwụrụ anwụ, n'ebe ndị dị ka nke a, oge bends na Ugbu a, + 4EVA. Ha gagharịa kpamkpam ofụri Australia, Europe na USA. Ụfọdụ nke otu Hits na were ha na ha mba ama bụ ndị na-esonụ.
Na m nwere ike n'Iyi
Nrọ A Little Crazy
Guzobere 2009 San Cisco bụ ihe Australia Indie pop gbalaga nke e nominated maka n'ala gwupụta na J Award na November 2011. Ọ bụ anọ na-mpempe gbalaga na mejupụtara Jordi Davieson, Josh Biondillo, Nick Gardner na Scarlett Stevens. Ha Indie pop nkume Hits ndị na-esonụ.
Ukwuu Time Ọnụ
The Jezabels e guzobere 2007. Ha wepụtara ha mpụta mbụ studio album Mkpọrọ na 2011 na peaked na Nke 2 on aria Albums Chart. Ha ndibọhọ Australian Music Nrite na 2011. ha nke abụọ album brink e wepụtara na 2014. The gbalaga ebipụtawo ọtụtụ otu Hits gụnyere ndị na-esonụ.
All Ị Mkpa
Oge na-agba egwu
Mmụọ ozi Of Fire
12) Boy & agba:
Boy & agba bụ ihe Indie nkume-ndiife music gbalaga nke e guzobere 2009 dee David Hosking, Killian Gavin, Timothy Hart, David Symes na Jonatan Hart. Na 2011 ha merie 4 aria Awards na 1 APRA Award. Ha na-nominated maka Best Australian Live Act na 2014. The gbalaga ebipụtawo ọtụtụ otu Hits gụnyere ndị na-esonụ.
Part Time kwere ekwe
Guy Sebastian bụ nke mbụ eto eto, nke Australian arụsị 2003. Ọ na ka a tọhapụrụ 8 top iri albums gụnyere 2 ọnụ ọgụgụ ndị. Sebastian e nominated na meriwo ọtụtụ awards ya ọrụ gụnyere ọwa V Artist nke Year. Ya na-esonụ Hits ndị a azụmahịa ịga nke ọma.
Mmụọ ozi Ka M ebe a
All m chọrọ bụ Ị
The Farriss Brothers kpụrụ INXS, akpọ dị ka "ke ngafe", na 1977. Na 1980 ha wepụtara onwe ha-akpọ album. The gbalaga meriwo 6 Australian ndekọ Industry Association kwuo, nke na-agụnye 'Best Group' na 1987, 1989 na 1992. IXXS akanyam 45 ọtụtụ nde ndia n'ụwa nile gụnyere ndị na-esonụ Hits.
15) Ndị ikom Rụọ Ọrụ Mgbe:
Ndikom na Ọrụ dị a 5-nwoke gbalaga dee Colin Hay, Jerry Speiser, Ron Strykert, Greg Ham na Jọn Rees. Na 1983 ha ndibọhọ Grammy Award maka kasị mma New Artist udi. The gbalaga e depụtara Nke 4 na 20111 on APRA Top 30 Australian songs. Ndikom na Ọrụ na-ere ihe karịrị 30 nde albums n'ụwa nile na-agụnye ndị na-esonụ Hits.
Ònye Nwere Ike ọ ga-Ugbu A?
16) mmadụ jupụtara na ụlọ:
Neil Finn, Paul Hester na Nick Seymour ndị e mesịrị sonyere site Tim Finn, Mark Hart na Matt Sherrod tọrọ ntọala jupụtara House na 1985. Ha tọhapụrụ ha onwe-akpọ album na 1987. Na 1994 mmachi na aha ya bụ International ìgwè nke Year. Mmadụ jupụtara House nwere azụmahịa ịga nke ọma na ha na-esonụ Hits.
Adịghị Kaanchaana Ọ bụ N'ime
Ihe mere Strong
Fall n'ụkwụ gị
Icehouse mbụ e guzobere 1977 na na mbụ mara ha pop nkume ịke ma ha imezu mainstream ịga nke ọma site na-akpọ ọhụrụ-efegharị efegharị na synthpop music. The gbalaga e rata ka aria Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha na 2006. Icehouse nwere azụmahịa ịga nke ọma na ha na-esonụ hit kpọrọ.
The 3 ụmụnna Barry, Robin na Maurice Gibb kpụrụ Bee Gees na 1958. Ha na-ere ihe karịrị 220 nde ndia-eme ka ha ụwa kasị mma n'ire music artists niile oge. The gbalaga edeba aha ya n'usuu na 1997 n'ime Rock na Roll Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha. Bee Gees nwere azụmahịa ịga nke ọma na ha na-esonụ hit singes.
Ị Mmeri Ọzọ
Ị steepụ n'ime My Life
Ị kwesịrị ị na-agba egwú
19) Etiti abalị Oil:
Etiti abalị Oil e guzobere na 1972 ma merie 11 Australian ndekọ Industry Association Awards na edeba aha ya n'usuu n'ime Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha na 2006. Ha album dizel na uzuzu na-họọrọ nke 1 na 2010 n'akwụkwọ The 100 Best Australian Albums. Etiti abalị Oil nwere azụmahịa ịga nke ọma na ha na-esonụ Hits.
Ike na The Rihanna
Ndị Nwụrụ Anwụ Heart
20) 5 Sekọnd nke Summer:
5 Sekọnd nke Summer e guzobere na 2011 dee Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood na Ashton Irwin. Na Were Me Home tour ha gagharịa na One Direction ma bilie na mba ama. Nke a tinyere ha na-esonụ otu Hits were ha na ha dị oké egwu tokwara.
Enye ese zuru okè